प्लाष्टिकका बोत्तल दिएर बसको टिकट ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि प्लाष्टिकका बोत्तल दिएर बसको टिकट !
on: October 27, 2018 र यो पनि
पछिल्लो समय विश्वभर प्रदूषण बढेका छन् । जमिन होस् या पानी सबै तिर प्लाष्टिकको झोला, बोतल, खानेकुराका प्याकेट यस्तै यस्तै वस्तु भेटिन्छ । फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन अहिले सबैको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यस्तोमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अनेक उपाय अपनाउन थालिएको छ ।
यसका लागि इण्डोनेशियाको दोस्रो ठूलो शहर सुराबायाले पनि अनौठो उपाय ल्याएको छ । खेर गएका वस्तुको पुनःप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न त्यहाँ अप्रिलमा योजना लञ्च गरिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत यात्रुहरुले प्रयोग भइसकेका प्लाष्टिकका कप र बोतल ल्याएर बसको टिकट किन्न सक्छन् । यस योजनामा यात्रुहरुले २ घण्टाको बस यात्रा गर्न आकारअनुसार १० ओटा प्लाष्टिकका कप वा पाँच ओटासम्म बोतल दिनु पर्नेछ ।
यस योजनाको मद्दतले सन् २०२० सम्ममा शहरलाई प्लाष्टिकको फोहोर रहित शहर बनाइने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ । यस्तो योजना ल्याउने सुरबाया इण्डोनेशियाकै पहिलो शहर हो । प्लाष्टिकका बोतल चारैतिर थुु्रपिएको देखेर वातावरण सफा बनाउन यस्तो अवधारणा ल्याइएको सुराबायाका बासिन्दा लिण्डा रहमावतीले बताइन् । यसले फोहोर सङ्कलकहरुको काम पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ । सुराबायामा दैनिक ४ सय टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । यसको करीब १५ प्रतिशत फोहोर प्लाष्टिक हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पछिल्लो योजनाबाट एउटा बसले दिनमा करीब २ सय ५० किलोग्राम प्लाष्टिकका बोतल र कप सङ्कलन गरिरहेका छन् । यसरी एउटै बसले महीनामा साढे ७ टन फोहार सङ्कलन गर्ने देखिन्छ ।
यसरी सङ्कलन भएको बोतलबाट लेबल र क्याप हटाएर यसलाई रिसाइक्लिङ कम्पनीलाई बेचिन्छन् । यसबाट आर्जित रकम बसको सञ्चालन गर्न र शहरभित्र हरियाली र बगैँचाको हेरचाह गर्ने कोषमा जानेछ । एजेन्सी